Hlola i-USA - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili e-Usa
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-USA
Bukela ividiyo mayelana ne-USA
Hlola i-USA noma njengoba zibizwa ngokusemthethweni njenge-United States of America, izwe elikhulu eNyakatho Melika. Ikhaya labantu besithathu ngobukhulu emhlabeni, elinabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-318, lifaka womabili lamadolobha anabantu abaningi anamadolobha agcwele nezindawo zemvelo ezinkulu ezingenamuntu.
Ngomlando wayo wokufuduka kwabantu abaningi kusukela ngekhulu le-17th, "kuyimbiza encibilikayo" yamasiko avela emhlabeni wonke futhi idlala indima enkulu esimweni samasiko omhlaba. Kuyikhaya eliningi lezindawo ezidumile zezivakashi, ezisukela kumabhisikidi aseManhattan kanye no Chicago ezimangalisweni zemvelo zeYellowstone ne-Alaska, emabhishi afudumele, anelanga aseFlorida nase Hawaii.
I-United States ayinakuchazwa kuphela yithelevishini nangama-movie. Likhulu, liyinkimbinkimbi, futhi lihlukile, linobunikazi bendawo obuhlukile. Ngenxa yobude obukhulu obuhilelekile, ukuhamba phakathi kwezifunda kuvame ukusho ukudabula izindawo eziningi ezahlukene, isimo sezulu, ngisho nezindawo zezikhathi. Ukuhamba okunjalo kwesinye isikhathi kungadla isikhathi futhi kubize kepha kuvame ukuzuzisa kakhulu.
I-United States inezindawo zezikhathi eziyisithupha.
Ukuma komhlaba kwe-Usa
I-United States yakhiwa ngezinhlanga eziningi ezahlukahlukene futhi amasiko ayo ahluka kakhulu kuyo yonke indawo enkulu yezwe ngisho nasemadolobheni amakhulu - idolobha elinjengeNew York lizoba nezinkulungwane eziningi, uma kungenjalo ngamakhulu, ezinhlanga ezahlukahlukene ezimelwe endaweni. Ngaphandle kwalome mehluko, kunomqondo oqinile wobunikazi besizwe kanye nezimpawu ezithile zesiko. Ngokuvamile, abantu baseMelika bavame ukukholelwa ekuzibophezeleni okukhulu nokuthi umuntu unquma impumelelo yakhe noma ukwehluleka kwakhe, kepha kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kunokuhlukahluka okungafani nokuthi izwe elihlukile njengoba iMelika inezinkulungwane zamasiko ahlukile amasiko.
I-United States inamadolobha, amadolobhana nemizana engaphezulu kwe-10,000. Okulandelayo uhlu lokuphawuleka kakhulu.
I-Atlanta - Ikhaya lasekhaya esisesikhumulweni sezindiza esixakeke kakhulu emhlabeni, bekuyiyona ebingabanjelwa kuma-1996 Summer Olimpiki
IBoston - eyaziwa kakhulu ngomlando wayo wamakoloni, uthando lwayo kwezemidlalo, kanye nabafundi basenyuvesi
Chicago - idolobha lesithathu ngobukhulu ezweni (yize namanje laziwa ngokuthi "iDolobha Lesibili"), inhliziyo yoMbindi Wokuhamba Okuphakathi nendawo yezokuhamba kwesizwe, enama-skyscrapers amakhulu namanye amagugu ezakhiwo
Las Vegas - idolobha lokugembula ogwadule lwaseNevada, ikhaya ukuya ngaphezu kwengxenye yamahhotela amakhulu e-20 emhlabeni; ithandwa ngamakhasino ayo, imibukiso nokudla kobusuku obukhulu
e-Los Angeles - idolobha lesibili ngobukhulu kuleli, ikhaya lezimboni zamafilimu, abaculi, abaculi, nabasubathi, ngesimo sezulu esihle esihle, ubuhle obuhle bemvelo kusuka ezintabeni kuya emabhishi, nemigwaqo engapheli, traffic, kanye ne-smog
Miami - Ukuheha abasenyakatho abafuna ilanga futhi nekhaya elinothile, ocebile, othonywe eLatin, I-Caribbean isiko
I-New Orleans - "I-The Big Easy" yindawo okwazalelwa kuyo iJazz, futhi yaziwa ngokugubha kwayo okuyiFrench Quarter nomgubho waminyaka yonke weMardi Gras
I-New York Idolobha - idolobha elikhulu kunawo wonke ezweni, ikhaya lezinsizakalo zezezimali kanye nezimboni zemidiya, ezinokudla okuphezulu kwezwe, ezobuciko, ezokwakha izakhiwo kanye nezitolo
i-San Francisco - Idolobha eliseduze neBay, eliqukethe iGolden Gate Bridge, izindawo zasemadolobheni ezinempilo, nenkungu enkulu
Washington I-DC - inhlokodolobha yamanje yamanje, egcwele iminyuziyamu emikhulu kanye nezigodlo, kanye nemiphakathi enamasiko ahlukahlukene
Lezi ngezinye zezindawo ezinkulu kakhulu nezidume kakhulu ngaphandle kwamadolobha amakhulu:
IGrand Canyon, i-Arizona ende kunazo zonke emhlabeni futhi evakashele kakhulu i-canyon
IDenali National Park - ipaki lesizwe elikude eliqukethe inani eliphakeme kakhulu laseNyakatho Melika
IMesa Verde National Park - izindawo ezigcinwe kahle zasePueblo cliff
Mount Rushmore - isikhumbuzo esimangazayo sabakhokheli bangaphambilini be4 sibunjiwe ebusweni bokhozi
I-Niagara Falls - izimpophoma ezinkulu ziwela umngcele neCanada
IGreater Smoky Mountain National Park - ipaki yelizwe eningizimu ye-Appalachians
I-Walt Disney World - indawo ethandwa kakhulu yamaholide emhlabeni
I-Yellowstone National Park - ipaki lokuqala likazwelonke e-US kanye nasekhaya kwegumbi elidala elithembekile
Yosemite National Park - ikhaya le-El Capitan kanye nezihlahla zeGiant Sequoia ezidumile
Ubungako be-US nebanga phakathi kwamanye amadolobha amakhulu kwenza umoya wendlela ehamba phambili yokuhamba kubahambi besikhashana abahamba amabanga amade. Uma unesikhathi, uhambe ngemoto, kungaba mnandi.
Uthando lokuthandana kwabantu baseMelika nemoto luyinganekwane futhi iningi labantu baseMelika lisebenzisa imoto uma lihamba phakathi kwedolobha lazo, nalapho lihambela emadolobheni aseduze esifundeni noma esifundeni sawo. Kodwa-ke, abantu baseMelika abaningi bangahamba futhi bahambe phakathi kwezifunda ezinkulu zezwe labo ngokuzenzakalela - bavame ukuhamba ezindaweni ezahlukahlukene zezindawo, indawo ezungezile kanye nezimo zezulu. Ezinyangeni zasebusika (ngoDisemba yize ngoMashi) izigidi zabama-omads baseMelika baya eningizimu ogwadule olufudumele nezimo zezulu ezifudumele kuyo yonke into kusuka ezimotweni ziye ezindlini zezimoto (ezibizwa nge- “RV's”).
Ngokuvamile, kufanele ube yi-25 noma ngaphezulu ukuze uqashe imoto ngaphandle kwemikhawulo noma izindleko ezikhethekile. Ama-ejensi ezimoto eziqashisayo kwezinye izifundazwe angakwazi ukuqasha imoto kubashayeli abancane njenge-21, kodwa kungaphoqelela ukwanda okukhulu. Izwe laseNew York naseMichigan linemithetho ephoqa izinhlangano eziqasha izimoto ukuba ziqashe abashayeli abancane njenge18.
Cishe yonke imoto evela kuzo zonke izinhlangano eziqashisayo e-US isebenza ngophethiloli ongafakwanga futhi ine-transmission ye-othomathikhi.
Iningi lama-ejensi ezimoto aqashisayo anamahhovisi wedolobha emadolobheni amakhulu kanye namahhovisi asezikhumulweni zezindiza ezinkulu. Akuzona zonke izinkampani ezivumela ukuthatha imoto kwelinye idolobha bese ziyilahla kwenye (zona ezenza cishe njalo zikhokhise enye eyengeziwe ngelungelo); hlola ne-ejensi yokuqasha lapho wenza ukubhuka.
Umculo - Mid-size emadolobheni amakhulu bavame ukudonsela amakhonsathi amakhulu amathikithi, ikakhulukazi ezinkundleni ezinkulu zemidlalo yangaphandle. Amadolobhana amancane kwesinye isikhathi aphatha amakhonsathi emapaki anamaqembu endawo noma amadala. Ezinye izindlela zifaka phakathi imikhosi yomculo efana neSan Diego's Street Scene noma iNingizimu ngasentshonalanga e-Austin. Amakhonsathi omculo weClassical aphathwa unyaka wonke futhi enziwa ngama-semi-professional and symphonies. IBoston, ngokwesibonelo, kwesinye isikhathi ifaka amakhonsathi mahhala ePaki Yomphakathi. Amadolobha amaningi nezifunda zinemisindo ehlukile. INashville yaziwa ngokuthi yiMusic City ngenxa yenani elikhulu labaculi bezwe abahlala kuleli dolobha. Kuyikhaya leGrand Ole Opry, enye yezindawo zomculo ezidumile ezweni. Umculo wezwe uthandwa ezweni lonke kepha ugxile kakhulu eningizimu nasezindaweni zasemakhaya ezise West. ISeattle yikhaya le-grunge rock. Amabhendi amaningi athandwa kakhulu asuselwa ngaphandle kweLos Angeles ngenxa yobukhona bokuzijabulisa okukhulu nokuxhunyaniswa kwezinkampani zamarekhodi.
I-Maring Band - Ngaphezu kwamakhonsathi omculo wendabuko, okuhlangenwe nakho okulinganayo kwamaMelika ngumkhosi weqembu lokuhamba. Umuntu angathola le micimbi cishe njalo ngempelasonto phakathi kukaSepthemba no-Thanksgiving kulo lonke izwe futhi kusukela ngoMashi kuya kuJuni eCalifornia. Hlola uhlu lomcimbi wendawo namaphepha ukuthola imininingwane. Okunye okuphawuleka yiBhendi yaseMelika Grand National Championship ebanjwa njalo ekwindla e-Indianapolis. Abafuna ukubona okuhle kunabo bonke kufanele bathole amathikithi okusebenza kwe- “fainali,” lapho amaqembu ayishumi nambili omkhosi ancintisana ngokuthola umncintiswano. Lo mcimbi manje usubanjelwe eLucas Oil Stadium. Yomibili imigwaqo “yomgwaqo” noma yama-parade band kanye ne- “field” noma ama-band band atholakala cishe kuzo zonke izikole eziphakeme kanye neyunivesithi eMelika.
Imikhosi Nemikhosi - Izinsuku ezimbalwa zokugubha izwe lonke. Kubandakanya uSuku lweSikhumbuzo, uSuku lokuzimela (akaSine kuJulayi), noSuku Lwabasebenzi. Amanye amaholide amakhulu njengoSuku Lokubonga amakwe yimikhosi yangasese. Amadolobhana amaningi kanye / noma izifunda zenza ama-fairs, ukuze kukhunjulwe ukusungulwa kwedolobhana noma isifunda ngemigibela, imidlalo, nezinye izinto ezikhangayo.
Day Memorial - kukhunjulwa ukuzidela okuphezulu okwenziwe impi yaseMelika efile. Akumele kudidaniswe ne-Veterans Day (11th November) ekhumbula ukusebenza kwabasebenza embuthweni wamasosha aseMelika, abaphilayo nabangasekho. Futhi kungukuqala okungekho emthethweni kwehlobo - lindela ithrafikhi esindayo ezindaweni ezidumile, ikakhulukazi amapaki kaZwelonke namapaki okuzijabulisa.
Usuku lokuzimela - Kugubha ukuzimela kweMelika eBrithani. Usuku luvame ukumakwa ngemigwaqo, imikhosi, amakhonsathi, ukupheka kwangaphandle nokugaya kanye nemibukiso yomlilo. Cishe wonke amadolobha afaka uhlobo oluthile lomkhosi wokugubha usuku. Amadolobha amakhulu ngokuvamile aba nemicimbi eminingi. IWashington, DC igubha usuku eMall ngeparade kanye nombukiso wokucima ukoma ngokumelene neSikhumbuzo saseWashington.
Usuku labasebenzi - I-US igubha uSuku Lwabasebenzi ngoMsombuluko wokuqala kaSepthemba, kunoMeyi 1st. Usuku Lwabasebenzi luphawula ukuphela kwenkathi yezenhlalo yehlobo. Ezinye izindawo, njengeCincinnati, ziphonsa amaqembu ukugubha usuku.
AmaPaki Kazwelonke. Kunamapaki kazwelonke amaningi kulo lonke elaseMelika, ikakhulukazi ingaphakathi elikhulu, elinikeza amathuba amaningi okujabulela imisebenzi oyithandayo yangaphandle, kufaka phakathi ukungcebeleka ngokuzijabulisa, ukugibela i-ATV, ukuhamba ngezinyawo, ukubuka izinyoni, ukubheka phambili nokugibela amahhashi. Ezindaweni eziningi zasemadolobheni, amanye amapaki kazwelonke agxilwe ezindaweni ezinomlando.
Izindlela ZikaZwelonke yiqembu le-National National Scenic Trails 'ne-National Historic Trails' futhi elifushane elingaphezu kwe-1,000 ngamafuphi i-'National Recurity Trails 'amamayela angaphezu kwe-50,000 amamayela. Ngenkathi zonke zivulekele ukuhamba ngezinyawo, iningi livulekile nokuhamba ngebhayisikili lasezintabeni, ukugibela amahhashi, nokukanisa futhi amanye avulelwe ama-ATV nezimoto.
Izitolo ezinkulu kanye nezindawo zokuthenga. IMelika indawo eyazalelwa kuyo “inxanxathela yezitolo” yesimanjemanje kanye “nenxanxathela yezitolo” evulekile. Ngaphezu kwalokho, izindawo ezingaphansi kwedolobha laseMelika zinamamayela ngamamayela amamayela amancanyana, noma imigqa emide yezitolo ezincane ezinendawo yokupaka eyabiwe, imvamisa eyakhiwa ngomgwaqo osezingeni eliphezulu. Amadolobha amakhulu asalungisa izifunda eziphakathi nendawo zokuthenga ezingahanjwa ngezithuthi zomphakathi, kepha imigwaqo enobungane yokuhamba ngezinyawo ayijwayelekile futhi imincane.
Izikhungo zokuphuma. AbaseMelika baphayona esitolo esidayisa izimboni, bese kuba yisikhungo sokuthenga, okuyindawo enxanxathela yezitolo equkethe izitolo ezinjalo. Izikhungo ezitholakalayo zitholakala emigwaqweni emikhulu eyi-Interstate ngaphandle kwamadolobha amaningi aseMelika
Abathengisi baseMelika bavame ukuba namanye amahora amade kakhulu ebhizinisi emhlabeni, ngamaketanga afana neWalmart ajwayele ukufaka izitolo ukuvula i-24 / 7. Izitolo zoMnyango nabanye abathengisi abakhulu zivame ukuvulwa kusukela ku-10 AM ziye kwi-9 PM izinsuku eziningi, futhi ngesikhathi samaholide wasebusika, zingahlala zivulekile kuze kube yi-8 AM kuya kwi-11 PM. I-US ayilawuli isikhathi sokuphakanyiswa kokuthengisa njengakwamanye amazwe. Abathengisi baseMelika bavame ukumemezela ukuthengisa ngawo wonke amaholide amakhulu, futhi nangaphakathi nganoma yisiphi isizathu noma kungekho sizathu nhlobo. Izitolo ezitolo zaseMelika zinkulu uma ziqhathaniswa nezitolo ezidayisa kwamanye amazwe, futhi amaphupho abathengi ayagcwaliseka.
Izimakethe zeFlea (ezibizwa nge- “swap meets” emazweni aseNtshonalanga) zinezindawo eziningi uma kungenjalo abathengisi abathengisa zonke izinhlobo zezimpahla ezingabizi kakhulu. Ezinye izimakethe zezimbaza zikhethekile kakhulu futhi kuhloswe ngazo ukuqoqa abaqoqi bohlobo oluthile; abanye bathengisa nje zonke izinhlobo zezinto. Nakulokhu, ukuxoxisana kulindeleke.
AmaMelika awazange asungule indali kodwa kungenzeka ukuthi ayifeza kahle. I-cadence esheshayo ehambisanayo, yokucula kwengoma yomthengisi wezwe, ukuthengisa noma yini kusuka ezilwaneni zasepulazini kuya kufenisha yefa, kuyinto ekhethekile, noma ngabe awunayo inhloso yokuthenga. Emadolobheni amakhulu, yibhekisa emagumbini endawo kaChristie noma kaSotheby, bese ubuka imidwebo, izinto zakudala nemisebenzi yobuciko ethengiswa endabeni yemizuzu ngamanani angena ezigidini.
Ukuthi udlani ku-Usa
Ukuphuza ini ku-Usa
Ama-nightclub aseMelika aqhuba i-gamut ejwayelekile yezigcawu zomculo ezahlukahlukene, kusuka kuma-discos anezingoma zomdanso eziphezulu ze-40 kuya kumakilabhu angacashile asebenzisa izingcezu ezincane zezinhlobo zomculo ezingcolile. Amakilabhu omdanso womculo wezwe, noma amathoni ahlonishwayo, abekwa impela awugqinsi eningizimu nasentshonalanga, ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya futhi kude nolwandle, kodwa itholakala cishe kunoma yiliphi idolobha. Ama-nightclub amaningi eMelika anendawo enkulu noma “indawo yokudansa” lapho abantu bebuthana khona njalo futhi bedansa baye emculweni odlalwa ngu-DJ, yize kwezinye izindawo zaseningizimu ejulile, abantu futhi badansa umculo odlalwa ngamaqembu bukhoma. Ama-nightclub amaningi abuye abe namalambu anemibala ehlukahlukene afakwe emalangeni ukuze kukhanye isimo somdanso. Kakhulu, iningi lemibhangqwana namaqembu aya kuma-nightclub, yize izingoma nazo ziya khona. Kodwa-ke, uma uya njengomuntu ongayedwa ekilabhini yasebusuku, khumbula ukuthi, e-United States of America, kuyasho ukuthi abantu besifazane bacele laba bafana ukuthi badansa nabo.
Abantu abakhubazekile baphathwa ngenhlonipho nangomusa e-US. Ukubuza umuntu ukuthi ikhubazekile yakho injani, ikuthole kanjani, njll. Abangani abaseduze kuphela okufanele babuze ngempela. Ukunyanya noma ukuhlekisa ngalabo abakhubazekile akwamukelekile. Izinja zensizakalo zivame ukusetshenziselwa lezo hhayi kuphela ngokukhubazeka ngokomzimba, kodwa futhi nokungabonakali. Ukulanda lezi zinja, ukuphazamisa noma ukuthatha izithombe zazo ngaphandle kwemvume kuyaphazamiseka. Hhayi ukukhubazeka kwawo wonke umuntu kuyabonakala, futhi kulindeleke ukuthi ungazinaki lezi zinja. Uma kufanele, buza lowo muntu imibuzo ngaphandle kokuphazamisa isilwane. Yizinja ezisebenzayo, hhayi ezifuywayo.
Amanzi ompompi ngokujwayelekile adayidwa futhi angafaka ne-fluorine. Noma kunjalo, abanye abantu baseMelika basebenzisa izihlungi zemifanekiso. Yize amanzi ompompi engeyona ingozi, amanye amaMelika athanda ukuhlunga (futhi kwesinye isikhathi abilayo) amanzi kampompi ngaphambi kokuphuza. Ihlobene nokunambitheka kunokuphepha kwangempela.
I-Ice ezindaweni zokudlela zenziwa ngemishini yeqhwa. Amanzi ahlala akhonzwa mahhala ezindaweni zokudlela.
Ungaphatha ibhodlela lamanzi elivuselelekayo (ipulasitiki esindayo noma insimbi) bese ugcwalisa futhi amanzi avela emithonjeni yokuphuza yomphakathi, eminye yawo eseyihlungiwe manje ukunambitheka, noma ube nesiponji esime mpo ukuze senze amanzi asabalalisa ngqo ebhodleleni.
Izinsizakalo zocingo zaseMelika (ezaziwa ngokuthi omakhalekhukhwini ngaphandle kobuchwepheshe obusetshenzisiwe) azihambelani kakhulu nalezi ezinikezwa phesheya. Ngenkathi i-GSM ithola ukuthandwa, i-US isebenzisa amaza okungajwayelekile we-1900 kanye ne-850MHz; hlola opharetha wakho noma umthengisi wefoni ukubona ukuthi ifoni yakho iyimodeli ye-tri-band noma i-quad-band ezosebenza lapha. Izindleko zokuzula zenzelwa ezenziwa kwamanye amazwe ziphezulu futhi imiyalezo kungenzeka ingahlali isebenza ngenxa yezinkinga zokuhambisana phakathi kwamanethiwekhi.
Iningi labantu baseMelika lingena kwi-Intanethi, ikakhulukazi emakhaya nasehhovisi. Amakhofi e-Intanethi, ngakho-ke, awajwayelekile ngaphandle kwezindawo ezinkulu zamadolobha amakhulu, izivakashi nezindawo zokuhlala. Noma kunjalo, cishe njalo unezinketho eziningana zokufinyelela kwi-Intanethi, ngaphandle kokuthi ezindaweni ezikude kakhulu, zasemakhaya.
I-Mesa Verde National Park
Isizinda somlando seCahokia Mound State
ILa Fortaleza neSan Juan Indawo Yomlando Kazwelonke ePuerto Rico
IMonticello kanye neNyuvesi yaseVirginia eCharlottesville
I-Monumental Earthworks of Poverty Point
Imihlangano yaseSan Antonio
I-20th-Century Architecture kaFrank Lloyd Wright